Einstein: Otu azịza nke Salesforce nke AI Nwere ike Drivechụ Azụmaahịa na Ọrịre Ahịa | Martech Zone
Einstein: Otu Azịza Salesforce nke AI Nwere Ike Drivechụ Azụmaahịa na Salesrụ Ọrụ
Monday, April 13, 2020 Monday, April 13, 2020 Douglas Karr
Ngalaba ahia na-abụkarị ndị a na-enweghị ọrụ na ndị na-arụ ọrụ gabiga ókè - na-etinye oge na data na-agagharị n'etiti usoro, ịchọpụta ohere, na itinye ọdịnaya na mkpọsa iji mee ka mmata, itinye aka, nnweta, na njigide. Agbanyeghị, oge ụfọdụ, a na m ahụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ijide mgbe enwere ezigbo azịza n’ebe ahụ nke ga-ebelata akụrụngwa dị mkpa iji bulie arụmọrụ zuru oke.
Amamịghe echiche bụ otu n'ime teknụzụ ndị ahụ - ọ na-egosipụtakwa na ọ na-enye ndị ahịa ahịa ezigbo uru ka anyị na-ekwu okwu. Onye ọ bụla n'ime isi ahịa ahịa nwere nke ha AI engine. Site na ikike Salesforce na ụlọ ọrụ ahụ, ndị ahịa Salesforce na Marketing Cloud kwesịrị ile anya Einstein, Ihe ahia AI nke Salesforce. Ọ bụ ezie na ọtụtụ injinị AI chọrọ ọtụtụ mmepe, etinyere Salesforce Einstein iji tinye ya na obere mmemme yana njikọta na azụmaahịa Salesforce na azụmaahịa… ma B2C ma ọ bụ B2B.
Isi ihe kpatara AI ji bụrụ onye ama ama na ahịa na azụmaahịa bụ na, ọ bụrụ na etinyere ya n'ụzọ ziri ezi, ọ na-ewepụ ajọ echiche nke ndị otu ahịa anyị. Ndị na-ere ahịa na-ahụkarị ọkachamara ma na-agagharị na ntụziaka ha kachasị mma mgbe ọ na-abịa maka akara, nkwukọrịta, na atụmatụ igbu. Anyị na-agbakarị site na data iji kwado okwu anyị nwere ntụkwasị obi kachasị.
Nkwa nke AI bụ na ọ na-enye echiche na-enweghị isi, na-adabere n'eziokwu, na nke na-aga n'ihu na-emeziwanye oge ka a na-ewebata data ọhụrụ. Mgbe m tụkwasịrị obi na afọ m, ihe ọ bụla AI rụpụtara masịrị m mgbe niile! N'ikpeazụ, ekwenyere m na ọ na-ewepụta oge m, na-enyere m aka ilekwasị anya na ngwọta okike na elele nke ebumnuche data na nchọta.
Kedu ihe bụ Salesforce Einstein?
Einstein nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka ịme mkpebi ọsọ ọsọ, mee ka ndị ọrụ rụpụta ọrụ, ma mee ka ndị ahịa nwee obi ụtọ site na iji ọgụgụ isi (AI) gafee Salesforce Customer 360 Platform. Ọ bụ njirimara onye ọrụ chọrọ mmemme dị ntakịrị ma jiri mmụta igwe were akụkọ data akụkọ ihe mere eme iji kọwaa ma ọ bụ bulie mbọ ahịa na azụmaahịa n'ọdịnihu.
E nwere ọtụtụ ụzọ ọgụgụ isi si arụ ọrụ, ebe a bụ uru na atụmatụ nke Salesforce Einstein:
Salesforce Einstein: Ngwa igwe
Inwekwu amụma banyere azụmahịa na ndị ahịa gị.
Nchọpụta Einstein - Nkwalite arụpụta ọrụ ma chọpụta usoro dị mkpa na data gị niile, ma ọ bi na Salesforce ma ọ bụ n'èzí. Chọta nghọta AI dị mfe na aro maka nsogbu siri ike. Mgbe ahụ, mee ihe na nchọta gị na-ahapụghị Salesforce.
Einstein Prediction Nrụpụta - redkọ amụma nsonaazụ azụmaahịa, dị ka oke ume ma ọ bụ uru ndụ niile. Mepụta ụdị AI ụdị na mpaghara ọ bụla Salesforce ma ọ bụ ihe nwere clicks, ọ bụghị koodu.
Einstein Nke Kacha Mma - Napụta ndị ọrụ na ndị ahịa ihe egosipụtara, n'ime ngwa ebe ha na-arụ ọrụ. Kọwaa ndụmọdụ, mepụta usoro ịme ihe, wuo usoro amụma, gosipụta nkwupụta, ma rụọ ọrụ akpaaka.
Azụmaahịa Einstein: Nhazi Asụsụ Eke
Jiri NLP chọta usoro asụsụ ị nwere ike iji zaa ajụjụ, zaghachi arịrịọ, ma chọpụta mkparịta ụka gbasara akara gị gafee web.
Asụsụ Einstein - Ghọta mmetụta ndị ahịa na-enwe, na-agagharị ajụjụ na-akpaghị aka, ma dozie usoro ọrụ gị. Mee nhazi asụsụ ebumpụta ụwa n'ime ngwa gị iji kọwaa ebumnuche na mmetụta dị na ederede, n'agbanyeghị asụsụ.
Igodo Einstein - Mee ngwa ngwa, zụọ, ma tinye botị omenala na ọwa dijitalụ ejikọrọ na data CRM gị. Mee ka usoro azụmahịa dịkwuo mma, nye ndị ọrụ gị ike, ma nwee ọ delightụ ndị ahịa gị.
Salesforce Einstein: Ọhụụ kọmputa
Ọhụụ kọmputa gụnyere njirimara usoro ọhụụ na nhazi data iji soro ngwaahịa na ika gị, mara ederede na onyonyo, na ndị ọzọ.
Anya Einstein - Lee mkparịta ụka ahụ dum gbasara akara gị na soshal midia na karịa. Jiri ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi na ngwa gị site na ịzụ ụdị mmụta miri emi iji mata akara, ngwaahịa na ndị ọzọ.
Salesforce Einstein: Akpata Okwu Akpaka
Nchọpụta okwu akpaghị aka na-asụgharị asụsụ a na-asụ n'ime ederede. Einstein na-agbakwụnye n'ihu, site na itinye ederede ahụ n'ọnọdụ azụmahịa gị.
Einstein Olu - Nweta mkpirisi okwu kwa ụbọchị, mee mmelite ọkwọ ụgbọala ma site na ịgwa Einstein Voice Assistant okwu. Na, mepụta ma bido omenaala gị, ndị na-enyere aka n'olu olu na Einstein Voice Bots.
Gaa na saịtị Salesforce's Einstein maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa a, ọgụgụ isi, nyocha AI, Jiri Ọnọdụ, na Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị.
Ndị ahịa Einstein
Jide n'aka na ị kpọtụrụ m Ndị ahịa ahịa na ụlọ ọrụ mmejuputa iwu, Highbridge, na anyị nwere ike inyere gị aka itinye na ijikọ nke ọ bụla n'ime usoro ndị a.
Tags: Amamịghe echicheọhụụ kọmputaeinsteineinstein nlpechiche einsteineinstein olunyocha onyonyonhazi asụsụndị ahịaNdị ahịa Einsteinsalesforce einstein amụmasalesforce amụmaKedu ihe bụ salesforce einstein
Squarespace: M wuru ebe nrụọrụ weebụ spa na Storelọ Ahịa Online na Nhazi Oge na Otu inbọchị